The Grand Budapest Hotel (2014) | MM Movie Store
1. Best Achievement in Costume Design2. Best Achievement in Makeup and Hair styling3. Best Achievement in Music Written for Motion Pictures,Original Score4. Best Achievement in Production Designဆိုတဲ့ အျောစကာ ဆု လေးဆု ရရှိခဲ့ပွီး တဈခွား Award မြားစှာကိုလဲရရှိပိုငျဆိုငျထားပါတယျ…
ဒီရုပျရှငျ ကွညျ့နတေုနျးမှာ မကျြလုံးကို အနားမပေးပါနဲ့ဆံပငျဒီဇိုငျး ဆကျတငျအခနျးအနား မကျြနှာအမူရာတှကေိုမလှတျတနျး လိုကျကွညျ့နပေါ အဖိုးတနျလှနျးပါတယျ…သငျဟာ ပုံပွငျနားထောငျရတာ ကွိုကျတယျဆိုရငျ ပိုသငျ့တျောပါမယျဘာလို့ ဆိုတော့ ပုံပွငျကောငျးတဈပုဒျကိုနားထောငျနရေတဲ့ အတိုငျးဇတျလမျးကို ပွောပွနလေို့ပါ…
ဒီရုပျရှငျ ရဲ့ အဓိက နရောကတော့ Grand Budapest ဆိုတဲ့ ပနျးရောငျအဆငျးခယျြထားတဲ့ ဟိုတယျကွီး ဖွဈပွီး….အဓိက ဇတျကောငျကတော့ ဟိုတယျအုပျခြူပျသူ ဂူဈစတစျေ့ နဲ့သူ့ရဲ့ တပညျ့ကြျောလေး ဧညျ့ကွို ဇီးရိုး တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ…
ဒီဇတျလမျးကို သငျကွညျ့နတေုနျး ဂူဈစတစျေ့ နဲ့ ဇီးရိုး ရဲ့ရာဇဝငျကို ခနျ့မှနျးမိအုံးမှာမဟုတျပါဘူး ဇတျလမျး ရဲ့၃ ပုံ ၂ ပုံ ရောကျရငျ မကျြရညျသုတျရမှာမို့ လကျကိုငျပုဝါလေးတော့ဆောငျထားပါ….
အစပိုငျး အခနျးတဈခြို့မှာ 18+ အခနျးတဈခြို့ ဖွတျခနဲ ပါတာကလှဲရငျမိသားစု ကွညျ့လို့ အဆငျပွတေဲ့ ရုပျရှငျကား ဖွဈပမေယျ့နားလညျလှယျဖို့ ခကျပါတယျ ပေါတောတော ကားတှေ ကွညျ့နတေဲ့သူတှေ အဖို့ နားမလညျပမေယျ့ စဉျးစားတကျ တှေးတကျ တဲ့ သူတှအေတှကျကတော့ လကျမလှတျနိုငျတဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျး တဈကားဖွဈကွောငျး အာမခံပါတယျ…
ဒီဇတျလမျး ရဲ့ အကွောငျးကို နညျးနညျးလေးမှ ရှငျးမပွခငျြပါဘူးဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ ပွောပွလိုကျရငျ ကွညျ့ရတဲ့ နရောမှာအရသာ ပကျြသှားမှာ ဆိုးလို့ပါ အဓိက အခကျြကတော့ဂူဈစတစျေ့ နဲ့ ဇီးရိုး တို့ ရဲ့ ကမောကျကမ စှနျ့စားခနျးတှကေပေါတောတော မဆနျပဲ ရယျရတာရယျ ဆရာတပညျ့ ၂ ယောကျရဲ့သံယောဇဉျ တဈခုရယျ အခဈြတှေ ဟာသတှေ သစ်စာရှိမှု နဲ့အလှမျးအဆှေး တှေ တဈနရောထဲမှာ ခံစားလို့ရမှာ ဖွဈပါတယျ…
1. Best Achievement in Costume Design2. Best Achievement in Makeup and Hair styling3. Best Achievement in Music Written for Motion Pictures,Original Score4. Best Achievement in Production Designဆိုတဲ့ အော်စကာ ဆု လေးဆု ရရှိခဲ့ပြီး တစ်ခြား Award များစွာကိုလဲရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်…
ဒီရုပ်ရှင် ကြည့်နေတုန်းမှာ မျက်လုံးကို အနားမပေးပါနဲ့ဆံပင်ဒီဇိုင်း ဆက်တင်အခန်းအနား မျက်နှာအမူရာတွေကိုမလွတ်တန်း လိုက်ကြည့်နေပါ အဖိုးတန်လွန်းပါတယ်…သင်ဟာ ပုံပြင်နားထောင်ရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ပိုသင့်တော်ပါမယ်ဘာလို့ ဆိုတော့ ပုံပြင်ကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်နေရတဲ့ အတိုင်းဇတ်လမ်းကို ပြောပြနေလို့ပါ…
ဒီရုပ်ရှင် ရဲ့ အဓိက နေရာကတော့ Grand Budapest ဆိုတဲ့ ပန်းရောင်အဆင်းချယ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ကြီး ဖြစ်ပြီး….အဓိက ဇတ်ကောင်ကတော့ ဟိုတယ်အုပ်ချူပ်သူ ဂူစ်စတေ့စ် နဲ့သူ့ရဲ့ တပည့်ကျော်လေး ဧည့်ကြို ဇီးရိုး တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီဇတ်လမ်းကို သင်ကြည့်နေတုန်း ဂူစ်စတေ့စ် နဲ့ ဇီးရိုး ရဲ့ရာဇဝင်ကို ခန့်မှန်းမိအုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး ဇတ်လမ်း ရဲ့၃ ပုံ ၂ ပုံ ရောက်ရင် မျက်ရည်သုတ်ရမှာမို့ လက်ကိုင်ပုဝါလေးတော့ဆောင်ထားပါ….
အစပိုင်း အခန်းတစ်ချို့မှာ 18+ အခန်းတစ်ချို့ ဖြတ်ခနဲ ပါတာကလွဲရင်မိသားစု ကြည့်လို့ အဆင်ပြေတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်ပေမယ့်နားလည်လွယ်ဖို့ ခက်ပါတယ် ပေါတောတော ကားတွေ ကြည့်နေတဲ့သူတွေ အဖို့ နားမလည်ပေမယ့် စဉ်းစားတက် တွေးတက် တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ လက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါတယ်…
ဒီဇတ်လမ်း ရဲ့ အကြောင်းကို နည်းနည်းလေးမှ ရှင်းမပြချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ပြောပြလိုက်ရင် ကြည့်ရတဲ့ နေရာမှာအရသာ ပျက်သွားမှာ ဆိုးလို့ပါ အဓိက အချက်ကတော့ဂူစ်စတေ့စ် နဲ့ ဇီးရိုး တို့ ရဲ့ ကမောက်ကမ စွန့်စားခန်းတွေကပေါတောတော မဆန်ပဲ ရယ်ရတာရယ် ဆရာတပည့် ၂ ယောက်ရဲ့သံယောဇဉ် တစ်ခုရယ် အချစ်တွေ ဟာသတွေ သစ္စာရှိမှု နဲ့အလွမ်းအဆွေး တွေ တစ်နေရာထဲမှာ ခံစားလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…